studio T2 - 10m Jazz kwi Marciac piscine / jacuzzi
Igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle yonke sinombuki zindwendwe onguMax
Ukuba ukhangele indawo yokuhlala ezolileyo, ngexesha okanye ngaphandle kwexesha lomthendeleko we-JAZZ e-MARCIAC, uya kuyifumana apha! Sirenta i-STUDIO epholileyo yokuziphekela ngeepaksi ezi-4 (iipaksi ezi-7: bona yongeza i-T3 & ne-tatamis) enomnyango owahlukileyo kumgangatho ophantsi wendlu yethu okwi-1.5ha estate. Ijikelezwe ziintyatyambo kunye negadi ecakwe yimithi, inesidiliya esiphilayo, amaplanga, ichibi / ijacuzzi. Indawo yayo ibonelela ngembono eyodwa yeePyrenees kunye nelizwe elihle eliqengqelekayo leGers, entliziyweni yeGascony.
Kumgangatho ophantsi wendlu yi-STUDIO enokufikelela ngasese, ikhitshi kunye negumbi lokuhlambela, ixhotyiswe ngokugqibeleleyo ukuze uhlale uphumle kwindawo ezolileyo neluhlaza ngaphandle kwabamelwane abathe ngqo, kodwa nazo zonke izinto eziyimfuneko ezikufutshane (igrosari, ivenkile enkulu, indawo yokubhaka. , IBhanki, iindawo zokutyela, iposi, njl ...) Apha unokufumana amava, ujabulele kwaye uphumle okanye uphumle emva kweeseshoni zakho zeJazz ... Jabulela uxolo kunye nendalo kwindawo eluhlaza. Kodwa ungaphinda usebenze apho: ukuhamba, ukukhwela ibhayisekile, ukukhwela inqanawa, ukuloba, ukukhwela iqhude echibini, ukudlala igalufa (imizuzu engama-20 ukusuka apha) ... Kwaye ngokuqinisekileyo ufumanisa lo mmandla wegourmet kunye nefoie gras kunye neetruffles, idumileyo. iiwayini kunye nemimoya yasekuhlaleni ... Senze i-oasis yoxolo, ilungele ukuhlala ngaphandle koxinzelelo. Ukusuka kumnyhadala weJazz eMarciac, ukugqiba uxolo ... ngemizuzu nje eli-10 ngemoto yakho!
Indlu yethu, ngaphandle kwabamelwane abathe ngqo, ibekwe ngokuzolileyo kwi-1.5 hectare estate kunye negadi enkulu eneentyantyambo, izidiliya kunye ne-grove. Nangona kunjalo, kunye neevenkile eziyimfuneko ezikufutshane ukubonelela xa kukho imfuneko. Ngombono onomtsalane wepanoramic wePyrenees kunye nelizwe elihle laseGers. Ibonelela ngayo yonke intuthuzelo yokuhlala ngokugqibeleleyo emaphandleni entliziyweni yeGascony, ebekwe kwinduli phakathi kweMarciac kunye nePlaisance, kwindawo entle yaseOccitanie, ilizwe leegourmets. Ukungcamla kwefoie gras, confit, magret, kunye nokungcamla kweFloc de Gascogne, Armagnac kunye neewayini ezinkulu zaseMadiran naseSaint Mont, kuyimfuneko! Kufuphi neziza zembali, ezifana 'neCircuit des Bastides' kunye 'neChemins de Compostela' kunye neLourdes. Iindawo ezikufutshane neendawo zendalo ezifana nePyrenees, zilungele ukuhamba kunye nentliziyo yendawo esebenzayo yenkcubeko, apho imicimbi yomculo yonyaka ihlelwa khona. Umzekelo kwi-Marciac (10min) i-JAZZ Festival eyaziwayo, kwisiqingatha sokuqala sika-Agasti. EMirande (30min) kuMnyhadala weLizwe, phakathi kukaJulayi. EVic Fezensac (30min) iTempo Latino ngasekupheleni kukaJulayi, kunye neminye iminyhadala emininzi, ngaphandle kokukhankanya iindlela zewayini okanye uMnyhadala we-D'Artagnan eLupiac (15min), indawo yokuzalwa yeeMusketeers eziThathu zoMbhali uAlexandre Dumas… Ukuhamba okuliqela kunokwenzeka. kummandla. Iindlela zohambo lwe-Saint Jacques de Compostela nge-15min, iPaki yeSizwe yasePyrenees kunye neLourdes ngo-1h, unxweme lwe-Atlantic kunye ne-Dune de Pilat nge-2h; Ulwandle lweMeditera kwi-3h. Umda waseSpain kwi-1h30 kwaye kude, i-Barcelona kwi-5h.
- Ukuba ucelwe kwangaphambili, sinokukunceda ukuba wenze amalungiselelo okuthatha okanye ukuhla ukusuka kunye nezikhululo zeenqwelo moya kummandla, ezifana: Tarbes / Lourdes, Pau, Toulouse, Biarritz kunye neBordeaux; Okanye izikhululo zikaloliwe ze-TGV, ezifana ne: Pau, Tarbes okanye Dax. (intlawulo iyasebenza)
- Ukuba kuyafuneka, siya kukunceda ngalo lonke ulwazi oluyimfuneko ukuze uhlale ukhululekile kwaye ungabinaxinzelelo kangangoko
- Ukuba ucelwe kwangaphambili, sinokukunceda ukuba wenze amalungiselelo okuthatha okanye ukuhla ukusuka kunye nezikhululo zeenqwelo moya kummandla, ezifana: Tarbes / Lourdes, Pau,…
Iilwimi: Nederlands, English, Français, Deutsch, 日本語, Español
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Beaumarchés